Ciidanka Somaliland oo weerar aan iska caabin la kulmin ku qabsaday degmada Taleex oo Cali Khaliif shir ka furay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ciidanka Somaliland oo weerar aan iska caabin la kulmin ku qabsaday degmada Taleex oo Cali Khaliif shir ka furay
Published on June 12, 2014 by sdwo · No Comments
Taleex 12/06/2014 (SDWO.COM & SomalilandNews.net) Ciidanka qaranka Jamhuuriyada Somaliland ayaa saaka waaberigii weerar balaadhan kula wareegay degmada Taleex oo uu ka socday shirkii Khaatumo seeg ee uu soo abaabulay Cali Khaliif Galaydh. Ciidanka Somaliland Ayaan wax iska cabin ah kala kulmin maleeshiyaadkii Cali Khaliif Galaydh oo iyaga iyo odayaashii ka qaybgelayeyba salaadii hore ay orod kaga baxeen degmada.
Wararku waxay sheegayaan inuu madaxweyanahu amray inaan mardanbe ciidanka qaranku degmadaasi aanay dib uga soo bixin sidii bishii hore dhacda oo kale. Siyaadiga fuaad aafan cade oo ka soo jeeda gobolka Sool ayaa todobaadkan aynu ku jirnay xukuumada Somaliland uGu baaqay in wax ka qabato shirka ka soo horjeeda qaranimada Somaliland ee ka socoda degmada Taleex.
Ciidanka qarnaka Somaliland ayaa haysta amar ah inay kaga dabatagaan kooxda Cali Calif Galaydh goob kaste oo ay kaga suganyahiin xuduudaha Somaliland.